Ireo Izay Tsy Mahalala
Ao anatin’ ity boky fianatra ity I Eveka Dag Heward-Mills dia mampianatra ny fomba hanamafisan’ ny fangaron’ ny fahatokiana ny fiasan’ ny mpitarika. Ara-baiboly, ara-tantara sy araka ny literatiora dia hita fa tena ilain’ ireo mpamaky isan-karazany ny resahana eto. ... Read more
Eto ihany ny farany ilay boky natokana ho an'ireo pasitera sy vadina pasitera! Tsy mihatra aminao ity boky ity raha tsy pasitera ianao na vadina pasitera! Raha mahafeno ny fepetra amin' ireo afaka mamaky ity boky ity ianao, dia avelao Andriamanitra hitory aminao ao amin' ity boky mahatonga saina ity. Ao amin'ireo pejy ireo, ny andraikitra miafina lalaovin'ireo vehivavy eo amin' ny fiainan'ireo ... Read more
Ovao Ny Ministera Pastoralinao
Tena tongasoa tokoa ity boky ity. Eveka Dag Heward-Mills, pastera ny tenany, no manazava ny antony sy ny fomba ny maha-hay atao ny manao izay ahombiazan’ ny asa fanompoana pastoraly. ... Read more
Na dia fangatahan’ Andriamanitra voalohany amin’ ny mpitarika aza izany dia vitsy tokoa ireo zavatra voasoratra mikasika an’io loha-hevitra io. Tsipihan’ i Dag Heward-Mills mazava tsara ireo fomba fanao tena manan-danja ao anatin’ ity boky ity izay mba hampitombi ny tsy fiovaovana ao amin’ ny fiangonana. Ny zavatra voarakitra ao amin’ ity boky ity dia tena mety sady mora ampiharina hany ka lasa ... Read more
Ireo Izay Manadino
Tsy mahatsiaro izay natao taminy ary matetika misafidy ny hanadino ireo zavatra sasantsasany ireo olona mpikomy. Tsy nahatsiaro izay nataon’ ny Tompo ho azy i Jodasy, tsy tsarony ihany koa ireo hitany sy reny tamin’ I Jesosy.Izay ny antony nahatonga azy ho ilay nanana toe-tsaina ambany fantatsika ankehitriny hoe ‘Jodasy’.Ny fahafahana mahatsiaro dia isan’ ny kalitao ara-panahy manan-danja ... Read more
Ireo Fahadisoana Goavana Folo Fanaon’ ny Pasitera
Miteny antsika ny Baiboly fa manao fahadisoana avokoa isika rehetra – tsy afa-miala amin’ izany ihany koa ire pastera. Ny fahadisoana dia mahatonga anao hihemotra raha tokony handroso. Fahadisoana iray afaka mampijanona anao tsy handroso any aloha.Inona no fahadisoana mety ataon’ ny pastera? Inona avy ireo fahadisoana folo fataon’ ny pastera?Asaina ianao hamaky ireo pejin’ ity boky mahagaga ity sy ... Read more
Ny avonavona dia poizina mahafaty izay nahavoa ny olombelona mandritry ny taona maromaro. Satria tsy mety hita, dia avonavona dia mahavita miteraka fahavoazana lehibe. Ahoana no ahafahantsika miady amin' ireo loza eo amin' ny fiainantsika? Amin' ny vaksinin' ny fanetren-tena! Ny Fanetren-tena dia hatsaran-toetra ara-panahy manan-danja. Vitsy ireo olona mahasahy manoratra mikasika ity hatsaran ... Read more
Ny Olom-Boahosotra Sy Ny Hosotra
Ny harena sarobidin' ny hosotra dia ao amin'ny voahosotra. Ny hosotra dia tsy misaraka amin'ny olona izay voahosotra. Ny hosotra dia ao amin' ny lehilahin' Andriamanitra! Ny hosotra dia miaraka amin' ny lehilahin' Andriamanitra! Ny hosotra dia eo amin'ny lehilahin' Andriamanitra. Ity boky vaovao sy mampientanentana izay nosoratan' i Dag Heward-Mills ity dia hampientanentana ireo izay mikatsaka ny ... Read more
Ny Fahaiza-Mitarika (Natonta faha-3)
Ny antso ho amin’ ny asa fanompoana dia antso ho amin’ n fitantanana. Dr. Heward-Mills dia maneho indray ireo fitsipika arahina nahatonga azy ho mpitarika Kristianina miavaka, sady toromarika natao ho an’ ny rehetra sy azo apiharina. Ireo fahamarinana voalaza eto dia hanainga fanahy ny maro ho amin’ ny fahaiza-mitantana. ... Read more
Inona no dikan’ny hoe tonga Mpiandry Ondry
Zavatra iray ihany no tonga ao an-tsainao rehefa maheno ny teny hoe “Mpiandry ondry” ianao – ondry! Ny ondry dia zava-manan’aina tsy mahaleo tena mila mpiandry. Ny mpiandry dia mpitari-dàlana mikarakara sy mitia ny ondry. Ao anaty baiboly Andriamanitra dia mahita antsika toy ny ondry eny amin’ ny ahitr’ Andriamanitra. Niteny an’I Petera ihany koa Jesosy hamahana ny ondriny mba ho porofon’ ny ... Read more
Misy ve ny ankoatry ny voajanahary ankehitriny ?Afaka manao fandidina any amin’ ny ankoatry ny voajanahary ve aho?Raha mbola manasitrana ny olona Andriamanitra, Maninon’ Izy no tsy manasitrana ny olona rehetra?Ahoana no ahafahako mandray ny hosotry ny fanasitranana?Fantaro ny valin’ireo sy ny fanontaniana maro mikasika ny fisehon’ ny Fanahy Masina anatin’ ity boky mahafinaritra nosoratan’i Dag ... Read more
Ireo Mpiampanga Anao
“Mety ‘ny mpiampanga eo anivon’ ny mpirahalahy’ no fahavalo lehibe indrindra hifanena aminao.” Raiso ny fahazavan-tsaina lehibe ahalalanao ny fomba fihitaran’ io sabatsy ny fanamelohana io, ary mianara mandresy izany raha mamaky ity boky fianatra, nosoratan’ i Dag Heward-Mills ity ianao. ... Read more